सर्जिकल गर्भपतन भन्दा मेडिकल गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार १२:००
गोरखामा सर्जिकल गर्भपतन भन्दा मेडिकल गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको छ । गर्भपतन दुई तरिकाले गरिन्छ सर्जिकाल र मेडिकल । सर्जिकल गर्भपतन औजारहरुको प्रयोगद्वारा गरिने प्रक्रिया हो भने मेडिकल गर्भपतन औषधी सेवनबाट गरिने स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विरबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सर्जिकल गर्भपतन गराउनेको संख्या एक सय ११ जना रहेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सर्जिकल नै गराउनेको संख्या जम्मा ८४ जना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने बढेर एक सय दुई पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मेडिकल गर्भपतन गराउनेको संख्या जम्मा सात सय ६७ जना रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आठ सय ५४ जना छन् भने २०७७/०७८ मा भने एक हजार ८८ जना रहेका छन् ।
गर्भपतन गराउनको लागी सुचिकृत संस्थाहरु जिल्ला भरि नै रहेको छ । गोरखा नगरपालिकामा गोरखा अस्पताल, रानीश्वारा स्वास्थ्य चौकी र कोखेआहाले सहरी स्वास्थ्य चौकी रहेको छ ।
त्यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिकामा एउटा, बारपाकसुलिकोट गाउँपालिकामा तिनवटा, अजिरकोट दुईवटा, धार्चे गाउँपालिकामा २ वटा, आरुघाट गाउँपालिकामा एउटा, भिमसेनथापा गाउँपालिकामा एउटा, शहिदलखन गाउँपालिकामा एउटा, सिरानचोक गाउँपालिकामा एउटा, पालुङटार नगरपालिकामा ५ वटा र गण्डकी गाउँपालिकामा ३ वटाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिइरहेको छ ।
गर्भपतन गराउने उमेरसमूहमा २० वर्ष भन्दा मुनिका पनि रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जम्मा गर्भपतन गराउने मध्यमा ११.५ प्रतिशत २० वर्षमुनिका रहेको श्रेष्ठले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा ७.८ प्रतिशत रहेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जम्मा ५.८ प्रतिशत रहेको छ । गर्भपतनको समयमा जटिलता देखिएकाहरु भन कमै मात्रामा रहेका छन् ।